Man United oo go’aamisay qiimaha ay kaga iibineyso Paul Pogba kooxaha Real Madrid iyo Juventus – Gool FM
(Manchester) 14 Feb 2020. Paul Pogba ayaa doonaya inuu ka tago garoonka Old Trafford waxaana la filayaa in arrintaan ay dhici doonto dhamaadka xilli ciyaareedka iyadoo ay adeegiisa wada xiiseynayaan kooxaha Real Madrid iyo Juventus.
Laakiin Manchester United ayaa isku dayeysa inay ku iibiso xiddiga reer France ee Paul Pogba lacagta ugu fiican ee waqtigan xaadirka ah, inkastoo qiimaha uu ka joogo suuqa kala iibsiga uu hoos u dhacay, sababa la xiriira inuusan kulamo badan ka qeyb qaadanin Red Devils xilli ciyaareedkaan dhaawac dartiis.
Wargeyska “The Guardian” ee wadanka Ingiriiska ayaa wuxuu shaaca ka qaaday in kooxda Red Devils ay diyaar u tahay inay ku iibiso Paul Pogba ku dhawaad qiimo dhan 83 milyan oo ginni, laakiin xilligan la joogo waxay u muuqataa in Juventus iyo Real Madrid aysan diyaar u aheyn inay bixiyaan lacagtaas.
Labada koox ayaa sheeganaya in qiimaha uu xoogaa ka badbadis u muuqdo marka loo fiiriyo qaab ciyaareedka uu Paul Pogba bixiyay tan iyo markii uu ku soo laabtay United sanadkii 2016.
Pogba ayaa xilli ciyaareedkaan ka qeybqaatay kooxda Manchester United 8 kulan oo kaliya, kaddib markii uu dhaawac ka soo gaaray canqowga bishii Sebtember, laakiin waxa uu doonayaa inuu ku soo laabto garoomada si uu uga qeybqaato kulanka Manchester derby ee bisha soo socota.
Tababare Quique Setién oo si RASMI ah ugu dhawaaqay liiska 18-ka xiddig ee kooxda Barcelona kaga qeyb galaya kulanka Getafe